Ungasibhala Kanjani Isihloko
Ungasibhala Kanjani Isihloko Esenza Izivakashi Zibandakanye
NgoMgqibelo, ngoMeyi 7, 2016 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Izincwadi zihlala zinenzuzo yokugoqa izihloko zazo nezihloko ngezithombe noma izincazelo ezinamandla. Endaweni yedijithali, lezo zinto zokunethezeka kaningi azikho. Okuqukethwe kwawo wonke umuntu kubukeka kufana kakhulu ku-Tweet noma Umphumela Wenjini Yokucinga. Kumele sibambe ukunakwa kwabafundi abamatasa kangcono kunabantu esincintisana nabo ukuze bacindezele futhi bathole okuqukethwe abakufunayo.
Ngokwesilinganiso, abantu abaphindwe kahlanu kunabo bonke abafunda isihloko esifunda ikhophi yomzimba. Lapho usubhale isihloko sakho, usebenzise amasenti angama-80 ngedola lakho.
UDavid Ogilvy, Ukuvuma Komuntu Okhangisayo
Qaphela angishongo ungayibhala kanjani i-clickbait, noma ungabenza kanjani abafundi bachofoze nje. Njalo lapho wenza lokho, ulahlekelwa ukwethenjwa okuzuze kanzima komfundi wakho. Futhi ukuthembela kuyisifiso sabo bonke abathengisi abafisa ukwenza ibhizinisi nomfundi wabo olandelayo. Kungakho amasayithi amaningi wokuchofoza angathengisi lutho ngaphandle kwesikhala sesikhangiso. Badinga izinombolo ukukhuphula amanani abo ezikhangiso, hhayi ukwethenjwa kwalezo zivakashi.
ISalesforce Canada ihlanganise i-infographic, Ungazibhala Kanjani Izihloko Ezinamandla Ezifuna Ukunakwa. Kuyo, bakhuluma ngokusebenzisa le ndlela elandelayo.
SHINE Indlela Yokubhala Izihloko Ezinhle
S - Yiba ethize mayelana nesihloko obhala ngaso.
H - Yiba kuyasiza. Ukunikeza inani ezilalelini zakho kukhulisa ukholo lwabo nokwethembela kuwe njengesiphathimandla.
I - Yiba ngokushesha okuthakazelisayo. Izihloko ezifakwe ngegama elingukhiye elijwayelekile azisiki.
N - Yiba izindaba. Uma omunye umuntu ebhale i-athikili engcono, yabelana ngayo futhi ugcine isikhathi sakho!
E - Yiba bezijabulisa. Ukukhuluma nge-Marketing speak and industry kuzolalisa abalaleli bakho.
I-infographic incoma I-CoSchedule's Blog Post Headline Analyzer, enginike i-B + kulesi sihloko. Lesi sikolo besiphezulu ngenxa ye- Indlela isici. Amaphuzu aphelele asuselwa ku- Inani Lokumaketha Ngokomzwelo i-algorithm ebikezela ukuthi isihloko sizokwabiwa kahle kangakanani ngokususelwa kusilulumagama esisetshenzisiwe.
Icebo elilodwa elilula ababhali abakhulu bekhophi abaqhubeka ukungikhombisa lona elisebenzayo ukuthi ungasonga kanjani isihloko sakho egameni lakho noma lakho ukuze uphoqeleke ukuthi ukhulume ngqo nomfundi. Ukukhuluma ngqo kumfundi wakho kukwenza ube ngowakho umuzwa futhi kwakha ukuxhumana okusheshayo phakathi kwakho nomfundi wakho, kukhuthaze abafundi bakho ukuthi bacofe ukuze bafunde konke okunye.
Tags: isilinganiso sokuchofozaclickbaitlwekucocisanabezijabulisaizihlokokuyasizaindlelaindlela yokubhala isihlokoukubhala kanjani izihlokoinfographicEzithakazelisayoizindabasalesforceabathengisi canadaikhasi lemiphumela yokusesha injiniinyokaKhanyisaethizeizihlokoukubhala izihloko zezindabaizihloko zokubhala
Indlela Yokwakha Imikhankaso Ye-imeyili Yenqola Yakho Yokuthenga
Ukuqonda i-NFC: Ezokuxhumana Kwenkambu Eseduze
Jul 11, 2016 ku-9: 53 AM
Izincomo ezinhle, Douglas! Uyazi yini? Ngiphinde ngisebenzise amathuluzi anjenge-HubSpot Topic Generator noma i-Blog Title Generator nge-BlogAbout - angisiza ukuba ngichaze isihloko esivamile ngendlela yokuthi sithathe ukunakwa kwabafundi. Ungabona izibonelo ezithile eziyinhloko ezikhiqizwe yilawa mathuluzi kubhulogi lami http://www.edugeeksclub.com/blog .
Ngendlela, angizwanga nge-Headline Analyzer - nakanjani ngizoyisebenzisa ngokuzayo.